Loharanon-tsarimihetsika tsara indrindra amin'ny Internet
Alarobia, Novambra 4, 2020 Alakamisy 11 martsa 2021 Douglas Karr
Inona ny sandan'ny logo? Anontanio ny orinasa toa an'i Nike dia mety hiteny ianao hoe dolara an-tapitrisany - fa ny marina dia, tamin'ny 1971, Nike dia nandoa $ 35 ho an'ny sary famantarana azy ireo. Amin'izao andro izao, ny tahan'ny mandeha ho an'ny famolavolana logo matihanina dia mety ho eo anelanelan'ny $ 150 sy $ 50,000. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa nandany $ 16,000 tamin'ny famolavolana logo izahay vao tsy ela akory izay vao hitany rehefa nanao ny Google Image Search ho an'ny orinasany izy ireo… dia nesorin'izy ireo ilay orinasa ary nanao fifaninanana famolavolana an-tserasera fa $ 250 ary nahazo am-boalohany, tokana, ary sary famantarana voafaritra tsara izay mifanaraka amin'ny marika ankapobeny.
Hitanay tanteraka ny sanda amin'ny marika ankapobeny, mpitari-marika, ary sary famantarana miaraka aminy. Mety ho fampiasam-bola lehibe izany, saingy ny orinasa nanao ny fampiasam-bola dia nahita ny vokany. Indraindray ianao tsy afaka mividy izany tsotra izao, nefa azonay! Raha mila sary famantarana fotsiny ianao, amin'ny tena marina dia misy loharano mahagaga eto.
Ireto misy loharanom-pahalalana logo 50 mahery hitako an-tserasera, manomboka amin'ny aingam-panahy ka hatramin'ny loka, amin'ny fifaninanana sy ny fifampiresahana, hatramin'ny bilaogy sy tranonkala tantara. Ankafizo!
Ny fanaovana sary famantarana
Tiavo ity horonantsary mpamorona ity izay namorona sary famantarana ao amin'ny Adobe Illustrator.
Ahoana ny famolavolana ny Logo Lavorary
Jereo hoe inona no ilaina mba hamoronana sary tonga lafatra miaraka amin'ireo torohevitra 10 ilaina amin'ny famolavolana logo Just Creative, miampy famaritana sary famantarana sary! Ankafizo.
Ny fango dia tokony tsotra.
Ny fango dia tokony tsy mety lany andro.
Ny fango dia tokony famoronana.
Ny fango dia tokony vakiana.
Ny fango dia tokony adaptive.
Ny fango dia tokony manaiky.
Ny fango dia tokony tsy manam-paharoa.
Ny fango dia tokony manan-danja.
Ny fango dia tokony nahira-tsaina.
Ny fango dia tokony matihanina.
Indraindray fantatrao izay tadiavinao, fa tsy manana talenta tsotra izao hitondra ny sarinao napkin amin'ny sary famantarana matihanina.
Logotypes - Ampidiro ny sarisary (sary iray amin'ny telefaonao, rakitra PowerPoint, na sary ao amin'ny Paint) dia hovainay ho logo lehibe ao anatin'ny ora maromaro.
Mamolavola ny Logo anao
DesignEvo dia mpanamboatra logo an-tserasera izay manampy anao hamorona logo tsy manam-paharoa sy matihanina maimaim-poana. Manolotra kisary iray tapitrisa mahery izy ireo azo karohina, fonosana amina endritsoratra an-jatony sy endrika azo isafidianana ary fitaovana fanovana mahery vaika hanamboarana ny sary famantarana.
Atombohy ny fananganana ny Logo anao
Loharano famoronana lozisialy Crowdsourced:
Ireo tranonkala Crowdsourced dia manana tamba-jotra fizarana mpamorona sary afaka mandefa logo. Ny mpandresy dia omena ny vola. (Tsara ho anao… tsy tsara ho an'ny mpamorona foana!)
Crowdspring - olona avy amin'ny 200 $.
DesignContest - mandefa ny fifaninanana manokana anao amin'ny $ 100.
DesignCrowd - Mila famolavolana logo? Ampidiro izao ny volanao amin'ny Internet!
Tondro nomerika - apetraho amin'ireto forum ireto ny vidinao sy ny zavatra takinao.
eYeka - Fifaninanana ifampidinana amin'ny besinimaro izay anononanao ny vidinao manokana (vidiny ambony sy loka).
48oraLogo - famolavolana olona avy amin'ny $ 89
Fifaninanana sary - fifaninanana amin'ny $ 1,000
GraphicRiver - Famolavolana logo sy modely
Hatchwise - fifaninanana manomboka amin'ny $ 100
LogoMyWay - fifaninanana manomboka amin'ny 200 $.
LogoTournament - Raiso ny sary famantarana izay tena tadiavinao amin'ny fisafidianana endrika 50-200 + namboarina tamin'ny $ 275.
99designs - volavolan-drafitra ampiasain'ny olona hatramin'ny 211 $
MycroBurst - avy amin'ny 149 $ ny vahoaka
pickyDESIGNS - mampiantrano ny fifaninanana famolavolana anao
ZenLayout - fifaninanana manomboka amin'ny 250 $
Orinasa logo malaza:
Ireo masoivoho izay manome serivisy logo dia mazàna manome toky fa tsy manam-paharoa ny asan'izy ireo ary miasa mba hifanaraka amin'ny sary famantarana ny marikao amin'ny ankapobeny.
Famolavolana logo mora vidy - fonosana amin'ny 45 $.
BusinessLogo.net - fonosana amin'ny 99 $.
BXC - orinasa marika, mangataha teny nindramina.
Company Folders - fakan-kevitra maimaimpoana, serivisy famolavolana manomboka amin'ny $ 75 isan'ora
Famoronana Logo tsy manam-petra - Volavola manomboka amin'ny $ 89
Inkd - fonosana famolavolana matihanina hatramin'ny $ 99
LogoBee - Volavola manomboka amin'ny $ 199
Logo Factory - Volavola logo manomboka amin'ny $ 395
Ekipa famolavolana logo - fonosana amin'ny $ 149
Logo International Design Agency - fifandraisana amin'ny teny nalaina
Ny Logo Loft - fonosana amin'ny 99 $.
LogoMagic.com - fonosana manomboka amin'ny $ 269.
LogoNerds.com - fonosana manomboka amin'ny $ 27.
Logotion - fonosana manomboka amin'ny $ 250.
Logoworks - avy amin'ny HP, volavola hatramin'ny $ 299.
Ny NetMen - Volavola manomboka amin'ny $ 149.
Vistaprint - logo efa vita sy mandeha ho azy manomboka amin'ny fampiasana maimaim-poana ny serivisin'izy ireo.
Tranokala aingam-panahy Logo:
Angamba ianao te-hanandrana mamorona sary famantarana anao manokana na mahita vitsivitsy manentana ny fanahy horesahina! Ireto misy tranokala loharanom-pahalalana tsara ho an'ny logo.
Blog-motives - avy amin'ny mpanolo-tsaina marika Jeff Fisher
Creattica - tranonkala iray avy any Envato
Logo malaza - tranokala natokana hitondrana anao ny sasany amin'ireo vaovao tsara, hevitra ary fampahalalana mifandraika amin'ny indostrian'ny famolavolana logo.
Logobird - Logobird dia bilaogy & studio misy endrika any London.
Ny Orinasa Logo - Volavola Logo manokana… maka endrika vaovao.
Logo Bliss - tranokala fanentanana sy famolavolana logo.
LogoPond - Mampiseho ny asa tsara indrindra amin'ny mombamomba azy amin'ny Internet ny Logopond. Mpanakanto famantarana avy amin'ny dingana fampandrosoana sy ny faritra manerantany no mazàna matetika ity tranonkala ity.
Blog Blog - Logo Blog dia natokana ho loharanon-karena voalohany amin'ny famolavolana logo.
Blog famolavolana logo - Logo Designer Blog dia bilaogy iray mifantoka amin'ny famolavolana marika, famantarana ary famantarana ny maha izy azy fotsiny.
Logo avy amin'ny Dreams Awards - bilaogy misy fandefasana isam-bolana sy mpandresy isam-bolana.
Logologie - Logolog dia bilaogy iray momba ny famolavolana logo.
Logolounge - vaovao sy fironana amin'ny logo.
Media Bistro - tranokala mari-pankasitrahana fanao isan-taona.
Ny Logo ho an'ny Highbridge
Taona maro lasa izay, nahita ny sary famantarana ahy ny mpamorona ahy ary nanohy nanontany ahy izy raha tiako ny havaozina. Tsy nitsahatra nilaza aho hoe tsia ary tena nomeny ahy ny dikanteniny…
Ohatra tsara amin'ny zavatra tsy manam-paharoa sy tsy hay hadinoina (raha ny fahitako azy). Nanao zavatra maromaro ilay mpanakanto:
Nampidiriny ny d sy ny k (karazana)
Nampiasa zana-tsipìka ambony izy hanehoana ny fahafahako manampy ny mpanjifa hitombo.
Nampiasa zoro tsy mahazatra amin'ny lafiny roa amin'ny logo izy hanehoana fa tsy nanao zavatra matetika aho.
Na dia mbola tsy nangataka taminy momba ny famolavolana indray aza aho dia tonga dia raiki-pitia tamin'ny fomba nanehoako ny marika manokana. Izaho dia nanamboatra indray ny karatra, ny fambara sy ny tranonkalako ny ampitso!
Vidio ireo rakitra Vector Logo handrafetana ny anao
Tianay ireo mpanohana anay ao Depositphotos ary manana logo taonina izy ireo izay azonao vidiana ireo rakitra vector. Mahita zavatra akaiky izay ilainao? Vidio izy, ampidino ary ampanjifao mba hahatonga azy ho anao!
Miantsenà Vector Ankehitriny!
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa izahay mandritra ity lahatsoratra ity.
Lahatsoratra fanampiny sy infografika
Ahoana ny fomba famolavolana sary miavaka sy tsy hay hadinoina
Ny fivoaran'ny logo
Loko fampiasa amin'ny Logo
Tags: sary famantarana mahatalanjonaorinasa mpamorona logo tsara indrindrafamolavolana logo amin'ny Internet tsara indrindraserivisy famolavolana logo amin'ny Internet tsara indrindramividy sary famantaranamividy sary famantaranafamolavolana logo mora vidy amin'ny Internetlogo mora vidy amin'ny Internetfamolavolana logo loharanom-baovaocrowddsourcefamolavolana logo an'ny vahoakasary famantarana olonafamolavolana logo maro befamolavolana logo an'ny vahoakafamantarana ny vahoakadepositphotosmamolava marikasary famantaranadesigncontestnataofamolavolana logo Internetmamorona fotsinylisitry ny tranokala logoLogologo fahasambaranabilaogin'ny sary famantaranafamerenan'ny orinasa mpamorona sary famantaranafifaninanana famolavolana logosary infographicaingam-panahy logotranokala logofanadihadiana logosary famantarana ny sary famantaranalogoloungelogopondLogoshevitra logo momba ny marketingmedia bistroaiza no hividianana sary famantarana
Instapage: Ny vahaolana PPC amin'ny vahaolana amin'ny fampielezan-kevitra rehetra
Jun 6, 2010 ao amin'ny 10: 40 PM
Douglas - Misaotra anao nampiditra anay tamin'ny lisitrao.
FYI dia vao avy namoaka endrika vaovao sy marina kokoa amin'ny 'hybrid crowdsourcing' izahay izay ahafahan'ny mpanjifa manasa sy mandoa vola mpamorona manokana hanaterana fifaninanana famolavolana - jereo ny famoahana an-gazety anio: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Ny zava-dehibe dia midika izany fa mahazo vola azo antoka ny mpamorona na inona na inona voafantina. Ny Crowdsourcing dia tsy voatery ho mpandresy maka ny rehetra na, araka ny lazainao, "tsy tsara ho an'ny mpamorona"! Raha liana amin'ny fanaovana dinidinika momba ny tenako ianao na manao tetikasa fandalinana tranga amin'ny alàlan'ny DesignCrowd dia mifandraisa amin'ny alàlan'ny http://twitter.com/designcrowd 😉
Ary koa, indreto misy loharanom-pamolavolana logo vitsivitsy ao amin'ny tranokalanay.
7 Jiona 2010 à 9:28
Na dia midera ny fahaizanao amin'ny “famolavolana logo” amin'ny Google aza aho, dia hitako fa maharikoriko ny fiparitahana sy ny fankalazana ny famolavolana logo mora vidy. Ireo tranonkala natolotrao dia manolotra kisary tsara tarehy (mitovitovy amin'ny "anaranao eto"), tsy misy eritreritra stratejika na inona na inona.
Ny fanosehana ny tranokalan'ny fango an-tsarimihetsika - raha mamoaka toro-hevitra momba ny hahazoanao logo "orizinaly" ianao - dia mahatsikaiky raha tsy manao tsirambina kely.
Marina amin'ny teboka iray ianao: azonao izay aloanao. Na izany aza, ny fanantenako ho an'ny mpamaky anao dia hanao fahazotoana kely kokoa izy ireo alohan'ny hanomezana ny logo ho ampahany amin'ny fifaninanana famolavolana.
Tale, talen'ny famoronana
Roa amby roampolo
7 Jiona 2010 à 11:07
Ankasitraho ny fanehoan-kevitra (tena manao izany) ary azoko ny sampan-draharahan'ny marika amin'ny toerana marimaritra iraisana mba hanaporofoana ny hasarobidin'izy ireo. Tsy isalasalana ny hasarobidinao – nahita orinasa toa an'i Kristian Andersen aho naka orinasa avy amin'ny tsinontsinona ka hatramin'ny dolara an-jatony tapitrisa – ny sasany amin'izy ireo dia noho ny faneken'izy ireo ny marika.
Eo ambanin'ny fanafihana ny famolavolana logo – tsy mitovy amin'ny orinasa hafa mifototra amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao. Misy olona toa an'i Chris Anderson miantsoantso hoe “Afaka!”. Ny tranokala fampiantranoana horonantsary dia tsy afaka mifaninana amin'ny YouTube, ny orinasa Analytics dia niady tamin'ny Google, ary ny rafitra CMS toa ny Squarespace mifaninana amin'ny WordPress.
Afaka nijoro aho ary niady hevitra hoe "No Spec", fa nampiasa ny sasany amin'ireo serivisy ireo aho ary nahazo vokatra tena tsara tamin'izy ireo. Tsy azo afenina fa na dia tsy tianao aza izy ireo dia mitombo ny lazany. Ary ho an'ny orinasa iray izay sahirana ara-bola ary tsy mahavidy marika matihanina, maninona raha mandeha amin'ny logo mora vidy? Tsy nanao na inona na inona izy ireo raha tsy izany.
Tiako ny manao lahatsoratra momba ny antony hialanao amin'ny sasany/maro amin'ireo serivisy ireo!
Jun 9, 2010 ao amin'ny 1: 38 PM
GeniusRocket (www.geniusrocket.com), tarihin'ny ex-AOL exec Mark Walsh ary tantanan'i Peter LaMotte, dia manana fahaiza-manao manerantany ho an'ny marika sy filàna famoronana hafa.
2 Novambra 2010 à 4:25
Misaotra nizara ny lisitra!
Vao avy namoaka tranonkala fifaninana famolavolana logo vaovao izahay: http://www.logoarena.com
10 Oktobra 2011 à 6:10
Esory amin'ny lisitrao azafady ny marvellogodesign satria FRAUD izany. Jereo ny http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 ary http://www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
10 Oktobra 2011 à 8:16
Misaotra, Michael! Nesoriko tao anaty lisitra izy ireo ary nampiako Creattica.
30 Novambra 2011 à 3:43
Mitandrema amin'ny famolavolana Logo Design Marvel. Mijanona lavitra, maka taona hamaly izy ireo. Tena tsy matihanina.
Jul 3, 2012 amin'ny 11: 54 AM
Apr 16, 2013 ao amin'ny 7: PM PM
Vao haingana aho no nanao logo tamin'ny http://www.logotypers.com Nalain'izy ireo ny sketch-ko ary navadika ho logo matihanina amin'ny $10 monja (fa tsy maintsy mampiditra sketch, na ppt na zavatra hitarihana azy ireo ianao)
Apr 16, 2013 ao amin'ny 8: PM PM
Tena hevitra mahafinaritra izany! Nanampy Logotypers amin'ny fizarana azy manokana aho. Misaotra!
May 21, 2013 amin'ny 6: 04 AM
Ny loharanon-karena rehetra amin'ny fizarana famolavolana logo dia mahasoa, endrika mahavariana miaraka amin'ny fampisehoana famoronana. Zavatra lehibe nozarainao. Mankasitraka indrindra ary mankasitraka ny fizarana malala.
May 13, 2015 ao amin'ny 3: 26 PM
Tiako ity lisitra ity. Ny zava-misy dia manolotra safidy isan-karazany ho an'ny olona sy rohy ianao, vita tsara… Mpiambina ity!
May 13, 2015 ao amin'ny 8: 21 PM
Misaotra betsaka Gabriella!
17 Oktobra 2015 à 1:34
Apr 21, 2016 ao amin'ny 8: PM PM
May 30, 2016 amin'ny 3: 12 AM
omg, mahafinaritra izany
May 30, 2016 amin'ny 3: 14 AM
rohy mahafinaritra, tnx
28 Jiona 2016 à 9:25
Ny logo dia sary fitaratry ny marikao. Tena mahavariana ny fomba fanaovanao logo.
Eny, mitentina $35 ny logo an'ny Nike tamin'ny voalohany, fa izao kosa dia mitentina mihoatra ny $600,000. Ny famolavolana logo tsara ihany no tsy afaka manampy anao hanatsara ny orinasanao. Ny serivisinao sy ny vokatrao dia tsy maintsy maneho ny tanjaky ny logo anao.
4 Oktobra 2017 à 6:02
Nikaroka hevitra momba ny Logo Design aho mba hanaovana logo tsy manam-paharoa ary nahita ny lahatsoratrao. Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Misy hevitra tsara azo ampiharina amin'ny tetikasako vaovao.
Aug 29, 2018 amin'ny 1: 30 AM
Misaotra tamin'ny torohevitra sarobidy nataonao
Dec 20, 2019 amin'ny 9: 16 AM
Lahatsoratra mahafinaritra momba ny famolavolana logo. Azo antoka fa nahazo aingam-panahy betsaka aho tamin'ny lahatsoratra vaovao. Misaotra betsaka amin'ity Doug ity, mirary Krismasy!
Janoary 7, 2020 amin'ny 4:08 PM
Misaotra betsaka amin'ny fanehoan-kevitra mahafinaritra Sally! Manantena aho fa nanao fialantsasatra nahafinaritra ianao.
May 16, 2021 ao amin'ny 12: 19 PM
29 Jiona 2021 à 9:49
Loharanom-pamolavolana Logo sasany azo antoka fa hanentana